Nkịtị nke ígwè China, 250W Metal Ride Reped, 250 Watt Led Supplier
Nkọwa:Ọkụ Mmiri Ọkpụkpụ,Ngwongwo nke dị na 250W nke ọkpụkpụ,250 Watt Led,250W Metal Ride Lamp,,
Home > Ngwaahịa > Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ > 250w Metal Halide Led Replacement
Ngwaahịa nke 250w Metal Halide Led Replacement , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọkụ Mmiri Ọkpụkpụ , Ngwongwo nke dị na 250W nke ọkpụkpụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of 250 Watt Led R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
80W Ejiri Mgbagwoju Anya Mgbagwoju Ogugu Nkeji  Kpọtụrụ ugbu a
E39 30W Biputere Post Top Corn Cob Bulbs  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo 80W Echetara maka 250W High Pressure Sodium  Kpọtụrụ ugbu a
250W mercury vapor bulb ada nnọchi  Kpọtụrụ ugbu a
Nkeji iri asatọ na anọ a na-anọchite anya metal Halide Bulbs nwere ihe ruru 10,400 Lumens ma nwee ike dochie anya mita 250 nke MH / HPS / HID / omenala. Anyị Dugara osisi Ìhè Retrofit eji SMD 3030 ikanam Lumileds nweta 130 lumens kwa watt na ibe...
Okpokoro Led Anyị 30W bụ nnukwu ihe na-egbuke egbuke 120lm / w elu watt to lumen, 30% dị ọkụ karị ma jiri ya tụnyere bọmbụ 30W LED. Nke a ọka Bulb 30W na- agbanye 100W na-ekpuchi bọtịnụ mgbe ị na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. The Led Corn Cob...
E39 nkedo ala 80 watt Low Pressure Sodium Led Replacement bụ 5000K ìhè na-acha ọcha, SMD2835 Diana ibe na 9600LM. Nke a 80w Led Sodium Replacement bụ ọkụ, okpomọkụ na-ebuli elu, obere oriri, nchekwa ike, ogologo oge, na Environmentally friendly...
Ngwá Ọrụ Na-agbanwe Ngwá Ọrụ Anyị na- eji nkà na ụzụ na-emepe emepe nke dị elu nke US E39. Nke a 80w na- anọchite anya nnukwu nrụgide Sodium nwere ebe obibi ntinye ma jikọọ na E39 Screw Bases. Biko rịba ama na a ga-agafe ballast mgbe ị na-agbanwe na...
China 250w Metal Halide Led Replacement Ngwa
250w Metal Halide Led Alternative can replace HID lamps up to 250w HID. Ọ na-aga n'ihu na nkà na ụzụ na-arụsi ọrụ ike na-eme ka arụmọrụ ọkụ dịkwuo mma ma na-anapụta mmepụta ọkụ kachasị elu na ọkụ dị ogologo na ndụ ọkwọ ụgbọala na-egbuke egbuke ka ọ na-ejedebe. Ngwongwo nke dị na 250W nke ọkpụkpụ na-enyocha site ETL n'okpuru 1598C na-emesi ya ike na nkwụnyeghachi a kwadoro na-ejigide nchekwa ọrụ nakwa dị ka ETL kwadoro maka ihe eji eme ihe. 250W Metal Ride Lamp ndụ niile bụ oge 50,000 awa akara ndụ (nke LM80 na IES na-akwado), Metal Halide lamp also has Warranty 5 Limited Warranty.
Ọkụ Mmiri Ọkpụkpụ Ngwongwo nke dị na 250W nke ọkpụkpụ 250 Watt Led 250W Metal Ride Lamp Ọkụ Ọkụ Uk